Thwebula Telegram Desktop 0.9.18 – Windows – Vessoft
Thwebula Telegram Desktop
Telegram Desktop – a software for the ukuxhumana phakathi kwabasebenzisi in a chat elula. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukushintshanisa imiyalezo, ukwakha izingxoxo group, ukwabelana amafayela emidya noma izithombe, amafayela exchange onomfutho njll Telegram Desktop inikeza ukufinyelela uhlu contact yomsebenzisi ngokusebenzisa ukuvumelanisa nge version mobile of the application. Isofthiwe ikuvumela ukuba ukucinga abasebenzisi ngegama nenamba yocingo. Telegram Desktop futhi kwenza ukuba ushintshe profile yakho, ukumisa izaziso futhi wengeza abasebenzisi ukuze bafakwe.
Exchange of amafayela
Search User by inombolo yefoni
Ukuvumelanisa oxhumana of
Ukuxhumana nge-USB ifu
Amazwana on Telegram Desktop:
Telegram Desktop Ahlobene software:
English, Français, Español, Deutsch... QQ 2.11 International futhi 6.4.12593 Standard
Imidlalo Le service mdlalo ukugijima imidlalo Blizzard. Futhi isofthiwe isekela ikhono umdlalo ngokuhlanganyela ngokusebenzisa internet.
Amafayela Ithuluzi ukusebenza idatha kusuka isitoreji ifu isevisi ye-Google. Isofthiwe kuqinisekisa ngejubane ukukhiqiza umsebenzi ngamafayela.
Codecs Isethi amakhodekhi futhi decoders ukudlala iningi alalelwayo ifayela ifomethi ngasiphi abadlali media.